မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ သိုင်းပညာရှင်များ စုပေါင်းကျင်းပသည့် စုံညီပွဲတော် မုံရွာတွင် ကျင? - Yangon Media Group
မုံရွာ၊ သြဂုတ် ၂၆
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မြန်မာ့ရိုးရာသိုင်းပညာရှင်များ ထိပ်သီးစုံညီပွဲကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့တွင် သြဂုတ် ၂၆ ရက်က ပြည်သူ့အားကစား ကွင်းမိုးလုံလေလုံခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါပွဲကို မုံရွာမြို့အခြေစိုက် မြန်မာ့ရိုးရာသိုင်းပညာချစ် မြတ်နိုးသူများအဖွဲ့မှဦးဆောင်ကျင်း ပခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်အနှံ့ ရှမ်း ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးတို့မှ သက်ကြီးမြန် မာ့သိုင်းပညာရှင် ၂၅ ဦး၊ သိုင်းအဖွဲ့ ၅ဝ ကျော်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံ သိုင်းအဖွဲ့ချုပ်တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
”အစကတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးထဲက သက်ကြီးသိုင်းပညာရှင်တွေ တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ပါ။ လုပ်ရင်းနဲ့ အခု တစ်နိုင်ငံလုံးက ပညာရှင် တွေပါ ပါလာတယ်။ သိုင်းဆရာကြီးတွေ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ သိုင်းပညာချစ် မြတ်နိုးသူများအသင်းကို ဖွဲ့ခဲ့တာပါ။ ရှေးအစဉ်အဆက် ထိန်းသိမ်းလာတဲ့မြန်မာ့သိုင်းပညာကို မျိုးဆက်သစ်တွေ မြင်တွေ့သိရှိ လေ့လာခွင့်ရအောင်လို့ လုပ်ဖို့စီ စဉ်တာပါ။ ဆရာကြီးတွေရဲ့ သိုင်းပညာစွမ်းတွေကို လူငယ်တွေ ဝါသနာရှင်တွေ လက်တွေ့လေ့လာခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု မြန်မာ့သိုင်းပညာချစ်မြတ်နိုးသူများအဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုသန်းဝင်းလှိုင်က ပြောသည်။
စုံညီပွဲတော်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှ သိုင်းဆရာများက လက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းလာသော ရိုးရာသိုင်းပညာသမားစဉ်များကို ပြသခဲ့သည့်အပြင် ဟုမ္မလင်း၊ ဖောင်း ပြင်၊ ကလေး၊ မြောင်တို့မှ သိုင်းအဖွဲ့များလည်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နာမည်ကျော်သိုင်း အဖွဲ့များဖြစ်သော ဇာနည်မောင်၊ သိင်္ဂီမောင်၊ ကျားနက်ပင်မ၊ ဇာမဏီသူရိယ၊ အောင်နေမင်း၊ မြန်မာ့နန်းတွင်း စစ်ကိုင်း၊ ငွေဗျိုင်း၊ ပွဲ ကျောင်း၊ ပြောင်းပြန်အဖွဲ့၊ သီဟ စသော သိုင်းအဖွဲ့မှ ဓားသိုင်း၊ တုတ်သိုင်း၊ လက်ရေးသိုင်းများကို အဆင့်ဆင့်ပြသခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကတ်ဖြင့် တရားဝင် သွားလာခွင့် ပြုပြီးနောက် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် 'ရိဒ်' ဂိတ်မှ ??
ဝမ်းတွင်းမြို့တွင် ကန်အတွင်း ပိုးသတ်ဆေးရည်များ ထည့်သွင်းသွားသည့် အတွက် ငါးအကောင် ၂ဝဝ ခန့် ?